Tag: poizina | Martech Zone
Fikendrena ny tontolon-kevitra: ny valiny amin'ny tontolo doka azo antoka?
Zoma 13 Novambra 2020 Zoma 13 Novambra 2020 Tim Beveridge
Ny fitomboan'ny ahiahy momba ny tsiambaratelo ankehitriny, miaraka amin'ny fahafatesan'ny cookie, dia midika fa ny mpivarotra izao dia mila manolotra fampielezana manokana, amin'ny fotoana tena izy ary amin'ny ambaratonga. Ny tena zava-dehibe dia mila maneho fangorahana izy ireo ary maneho ny fandefasan-kafatra any amin'ny tontolo azo antoka. Eo no ilana ny herin'ny lasibatra amin'ny sehatra. Ny fikendrena ny fifandanjan-kevitra dia fomba iray hikendrena ireo mpihaino mifandraika amin'ny fampiasana teny lakile sy lohahevitra azo avy amin'ny atiny manodidina ny lisitra dokam-barotra, izay tsy mila cookie na iray hafa